Sinyukile isibalo sabashonile eTshwane – LIVE Express
Sesenyukele kwabahlanu (5) isibalo sabantu asebeshonile selokhu kuqale imibhikisho enodlame eTshwane, e-Gauteng.
Kusukela ngoMsombuluko izakhamizi emalokishini ahlukene ngaphansi kwaMasipala wase-Tshwane bezilokhu zisemibhikishweni eminingi ehambisana nodlame kanye nokuzitapela ezitolo.
Ababhikishi bathi abaneme ngokuqokwa kwaThoko Didiza njengozomela i-African National Congress (ANC) njengeMeya kulo masipala. Bathi bafuna kuqhubeke loyo oyiMeya yase-Tshwane, u- Kgosientso Ramokgopa.
NgoLwesine kutholakele izidumbu ezimbili e-Central City Shopping Mall, e-Mabopane, eNingizimu neTshwane.
Ukutholakala kwelezi zidumbu ezimbili kulandela ukubulawa kwabanye abantu ababili abadutshulwe ngenkathi kuqhubeka izigameko zokuzitapela ezitolo ezisemalokishi eMamelodi, ngoLwesithathu.
Ngesonto kwadutshulwa kwabulawa ilunga le-ANC ngenkathi leli qembu lisemhlanganweni wokumenyezelwa kozomela iqembu njengeMeya eTshwane. Kodwa-ke lowo mhlangano awubange usaqhubeka ngenxa yalesi sigameko.
Umbhikisho wangomsombuluko noLwesibili waba nezigameko eziningi zokucekelwa phansi kwempahla okubalwa kukho ukushiswa kwamabhasi angaphezu kwama-22, iloli, kanye nemoto yamaphoyisa.
Kodwa-ke liye lashintsha igiya ngoLwesithathu njengoba besekunezigameko eziningi zokuzitapela ezitolo zokudla, ezokugqoka kanye nezefenisha.
i-ANC izigxekile lezi zigameko yaphinde yasola lokho abakubize ngezenzo zobugebengu esezisebenzisa leli thuba lemibhikisho ukufeza izinhloso zazo.